"Toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny amin’izay andro hahatratrarany ny ondriny izay efa niely, dia toy izany no handinidinihako ny ondriko sy hamonjeko azy." Ezekiela 34:12
Tamin’ny ady lehibe faharoa, nisy kristiana iray nandray anjara tamina fisafoana amin’ny alina, akaiky dia akaiky ny faritra misy ny fahavalo. Nilaina ny fanginana tanteraka. Nivaha matetika anefa ny tadin-kirarony iray; tsy maintsy niondrika izy, namatotra izany, ary avy eo nihazakazaka hanenjika ireo namany, ka tandindomin-doza hisy hahita. Manampy ny tebitebiny satria akaiky fahavalo, ny hasorenana noho izany toe-javatra izany.
Raha iny niondrika iny izy hamatotra ny tadin-kirarony indray, dia nisy tifitra variraraka nanandrify azy ary nandalo indrindra teo amboniny. Avotra ny ainy noho io tadin-kiraro nivaha lava io. Takany fa fomba nampiasain’Andriamanitra hiarovana azy izany, ka dia nisaorany Azy tam-pihetseham-po.
Indraindray dia misy toe-javatra mahasorena, avelan’ny Tompo hitranga eo amin’ny fiainantsika. Te hampiato antsika amin’ny lalana nizorantsika Izy, mba hampahatonga saina na hiarovany antsika. Ny voalohany asetrintsika izany dia matetika fikomiana, ary tsy takatry ny saintsika ny zava-miseho.
Hosea mpaminany dia nampiharihary ireo fitsimbinan’Andriamanitra izay tsy takatry ny olony. “Niodina tamiko (izy) ; Izaho ta hanavotra azy” (Hosea 7:13). “Tsy fantany fa Izaho no nahasitrana azy. Tamin’ny kofehy fitarihana olona no nitarihako azy, dia tamin’ny mahazakan’ny fitiavana; ary efa toy izay manainga ny fehim-bava eo ambonin’ny valanoranony Aho” (Hosea 11:3,4).
Afafin’ny Tompo eo amin’ny fiainantsika ny mariky ny fitiavany, tsy hitantsika avy hatrany ireny. Aoka hatoky Azy, dia hahay hamantatra ireny.